कृषिलाई सस्कृतीको रुपमा मात्र होइन व्यवसाईक रुपमा अघाडी बढाउनु पर्छ - Samadarshi Sanchar
कृषिलाई सस्कृतीको रुपमा मात्र होइन व्यवसाईक रुपमा अघाडी बढाउनु पर्छ
समदर्शी संचार, शुक्रबार, ११ भदौ, २०७८, दिउँसोको १२:३६ बजे
सव्जी बजार कृषी सहकारी सस्थाको पृष्ठभुमी बताईदिनोस न ?
यो सब्जी बजार कृषी सहकारी सस्था लि २०७३ पुस १ गते दार्ता गरी सुरुवात गरिएको संस्था हो ।
सहकारीको नियम अनुसार सुरुमा २५ जान शेयर सदस्य बाट सुरु गरीएको यस संस्थामा हाल १ सय ५० जना शेयर सदस्य संख्या पुगेको छ । ३ लाख शेयर पुजीबाट
कारोबार सुरुगरेको संस्थाको कुल कारोबार हाल ९० लाख पुगेको छ ।
यस संस्थाले के कस्ता कार्यहरु गर्दै आएको छ ?
–नेपाल कृषी प्रधान देशमा परीचित भएता पनी कृषीमा आत्मा निर्भर हुन नसक्नु आफैमा दुखत पक्ष हो । तसर्थ थोरै भएपनी टेवा पुगोस भन्ने हिसाबले यस संस्थाले कृषी पेसामा लागेका युवाहरुलाई सामुहीक जमानीमा विनाधितो न्युनतम कर्जा प्रधान गर्ने व्यवस्था मिलाएकाछौं । साथै विभिन्न समयमा कृषि पेशा र तरकारी खेतीका बारेमा परामर्स प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छांै ।
यस संस्थाबाट कति शेयर सदस्यहरु लाभान्वित रहेका छन् ?
–सबै शेयर सदस्यहरुको हितका लागी काम गर्ने संस्थाको उधेश्य हो । त्यसमा पनी निम्न र मध्यम वर्गिय सेयर सदस्यहरु बढी लाभान्वित भएका छन् । जसमा ३० जना सेयर सदस्यहरुले यसै संस्थाबाट कृषि कर्जा प्रप्त गरी जिविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । आर्थिक रुपमा प्रगती गरेका छन् । अन्य सहकारी भन्दा पनी कृषि क्षेत्रको सहकारी भएकोले यस संस्थासँग कारोवार गर्न सहज भएको शेयर सदस्यहरुको प्रतीकृया पाउदा हामीलाई खुसी लागेको छ ।
यस संस्थाको उपलव्धी बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
आफ्नो पहुचमा युवाशत्तीलाइ पलायन हुनबाट रोक्ने हाम्रो मुख्य उदेश्य हो । अत्यन्त धेरै सम्भावनाका स्रोत साधनले सम्पन्न भएका हाम्रो देशका युवाहरुलाई केही सम्भावना नदेखेर पलायन भई रहेको अवस्थामा यही केही गर्ने उत्प्रेरणाको स्रोत बन्नुपनी ठुलो कुरा हो । र हामीले हामीसंग जोडीएका युवाहरुलाई स्वदेशमा नै व्यापार व्यवसाय गर्न उत्प्रेरीत गरेका छौ । कृषिलाई सस्कृतीको रुपमा मात्र होइन व्यवसाईक रुपमा अघाडी बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ लागि परेका छौ । यसमा हामी सफल भएका छौ ।